Egbula ndị CMS, ata ụta banyere Onye Okike | Martech Zone
Nke a ụtụtụ na m nwere oké oku na a nwere ahịa banyere ha inbound ahịa azum. Ha kwuru na ha na ụlọ ọrụ na-ezukọ iji mepụta weebụsaịtị ha. Achọpụtara m tupu oku akpọọ na ha abanyelarị WordPress ma jụọ ha ma ha ga-anọgide na-eji ya. Ọ sịrị ọ bụghị ma kwuo na ọ jọgburu onwe ya… ọ nweghị ike iji saịtị ya ọ bụla ihe ọ chọrọ ime. Taa ọ na-ekwu okwu ya na ụlọ ọrụ siri ike nke ga-emepe na Ngosipụta Ngosiputa.
Ekwesịrị m ịkọwa na anyị arụ ọrụ Ngosipụta Ngosipụta ọtụtụ, kwa. Anyị na Joomla rụkọrọ ọrụ, Drupal, Ahịa ahịa, Imavex na ọtụtụ usoro njikwa ọdịnaya ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ sistemụ CMS chọrọ ụfọdụ nlekọta ịhụnanya dị nro iji nweta uru niile nke ọchụchọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, anyị achọpụtala na imirikiti sistemụ CMS ka ahapụrụ iche… ọ bụ ezie na ọrụ nhazi na ịdị mfe nke ọrụ na-ekewa naanị.
M ga-adị njikere nzọ na a ahịa nwere ike mezuo ihe ọ bụla ọ ga-achọ ka WordPress. Nsogbu a abụghị WordPress, n'agbanyeghị, ọ bụ ụzọ e si mepụta isiokwu ya. Otu onye ahịa anyị bidoro ịrụ ọrụ na nso nso a bụ ụlọ ọrụ VA Loan Refinance. Ha bụ nnukwu ụlọ ọrụ - na-enyeghachi ndị ọrụ ebere ebere oge ọ bụla ha nakọtara ozi. Ọ bụ ezie na anyị na-eme otu ụdị nke WordPress WordPress, anyị bụ ndị na-amaghị nke ọma na onye ahịa nwere ike ịnweta saịtị mara mma, kachasị, ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ CMS ọ bụla ka ha nwere ike na WordPress. WordPress bụ nnọọ ewu ewu ugbu a ka anyị hụ onwe anyị na-arụ ọrụ karịa na ikpo okwu karịa ndị ọzọ.
Mbinye ego VA zụrụ isiokwu omenala wee goro anyị ka anyị wee zụlite ọchụchọ na atụmatụ ha. Isi okwu a bụ ọdachi… enweghị ojiji nke akụkụ, menu, ma ọ bụ wijetị. Edere ihe niile dị na ndebiri ha na enweghị iji ihe ọ bụla dị ukwuu nke WordPress nabatara. Anyị nọrọ ọnwa ole na ole sochirinụ iji weghachite isiokwu ahụ, na-etinye ọnụ ndọda Forms na Leads360, ma na-etolite wijetị nke na-eweghachite ọnụego nnyefe kachasị ọhụrụ iji gosipụta na saịtị ha site na ụlọ akụ ha.
Nke a bụ nsogbu usoro na ndị na-emepụta isiokwu na ụlọ ọrụ. Ha ghọtara otu esi eme ka saịtị dị mma, mana ọ bụghị otu esi emezi CMS n'ụzọ zuru ezu iji tinye akụkụ niile dị iche iche nke onye ahịa ahụ nwere ike ịchọrọ mgbe e mesịrị. Ahụla m Drupal, Ngosipụta Ngosipụta, Nnwere onwe nnwere onwe, na saịtị MarketPath ndị mara mma ma baa uru… ọ bụghị n'ihi CMS, mana n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ mepụtara isiokwu ahụ nwere ahụmịhe zuru oke iji tinye atụmatụ CMS niile nke na-eme ka ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ibe ọdịda, ụdị ya, wdg. chọrọ.
Ezigbo onye na-ese okwu nwere ike ịmepe isiokwu mara mma. Nnukwu onye mmebe isiokwu ga-emepe isiokwu ị nwere ike iji maka afọ ndị na - abịa (ma kwaga ngwa ngwa n'ọdịnihu). Ekwula ịta ụta na CMS, taa onye mepụtara isiokwu ahụ ụta!
Tags: CMSusoro njikwa ọdịnayaDrupalụdị ndọdaimavexinbound marketingmwekotaJoomlaahịaisiokwunhazi usoroWordPress
Feb 22, 2012 na 3:51 PM
Ntu ya n'isi. Anyị na-azụlite ezigbo 90% nke ọrụ anyị na WordPress ma enwere oge ị ga-anụ nkwupụta dịka nke a na ihe dịka “Ọfọn, ọ nweghị ike ime __________”. Kedu nke bụ nzaghachi ziri ezi bụ, “Ọ bụrụ na enwebeghị ihe dị ebe ahụ dabara na mkpa gị (isiokwu na / ma ọ bụ plugins), ma ọ bụrụ na onye nrụpụta gị maara otu esi eji API, ị nwere ike ịme ihe ọ bụla ịchọrọ ịme dịka ọ bụrụhaala na oge na-emefu ego ya ebe ahụ. ”
Mana oge ụfọdụ ndị ahịa na-etinye uche ha n'ihe "ọhụụ", yabụ ị ga-eji ya tụgharịa ma ọ bụ tụgharịa ya.
Feb 23, 2012 n’elekere 10:08 nke abali
Nke ahụ na-akpali mmụọ. Mgbe m malitere ọrụ na Reusser Design, agbanweela m nke ukwuu na m na-arụ ọrụ n'ime EE, CMS anyị họọrọ, site na WordPress, nke m na-arụ ọrụ ọtụtụ mgbe m nọ naanị m. Ekwenyere m na gị na isiokwu WP m mere mgbanwe niile. Ihe dịka WooTheme's Canvas isiokwu, dịka ọmụmaatụ, dị oke mma ka ọ rụọ ọrụ n'ime, ebe enwere ụfọdụ "adịchaghị" na isiokwu omenala ebe ahụ bụ naanị icky.
N'ikwu ya, ana m amasị EE maka njikwa ọdịnaya weebụsaịtị, na ikpe ebe “ịde blọgụ” abụghị ihe kacha mkpa. Ọ dị mfe, ọ mara mma, ma ọ dị ike karịa WP, echere m. N'agbanyeghị nke ahụ, mgbe ị na-ede ọtụtụ ederede ma ọ bụ na ịde blọgụ n'ime CMS gị, ọ nweghị ihe meriri ahụmịhe onye ọrụ nke WP maka onye edemede ahụ.
Daalụ maka post gị!
Feb 28, 2012 na 10:26 PM
@awelfle: disqus Enwere m ntughari mgbe ọ bịara EE, edepụtara ya maka ndị mmepe MVC. N'iburu nke ahụ n'uche, m ghọtara na mmepe bụ ihe enyi na enyi na ọ bụghị ihe esemokwu. Ebe ọ bụ na anaghị m eche banyere onwe m dị ka onye na-emepụta ihe eji arụ ọrụ, ana m agbasochi ihe dị mfe nke na-achọghị ka ọtụtụ echiche (mana enwere ike ime ihe n'eziokwu imebi ọtụtụ ihe!).
Feb 28, 2012 na 4:54 PM
Saịtị a gosipụtara na ọ gbanwere ụdị TwentyEleven. Ọ̀ bụ otú ahụ ka ọ dị? Kedu ụzọ ọ bụla, ị ziri ezi; ihe niile gbasara isiokwu ahụ, ọ bụghị CMS. Mana WordPress, IMHO, bụ ikpo okwu kachasị mma iji rụọ ọrụ na oge a.
Feb 28, 2012 na 6:56 PM
Ezi anya, @jonschr: disqus! Ọ bụ isiokwu TwentyEleven gbanwere nke ukwuu… anyị dọwara ya n'ezie! Anyị abanyebeghị na ikpuchi aha isiokwu niile. Anyị masịrị eziokwu ahụ na anyị na-enye ndị ezigbo mmadụ na @Wordpress: na-eleghara anya ha kwesịrị.
Feb 28, 2012 na 9:40 PM
Site na mmasi: Enwetara m ebe a site na peeji HTML na-agbadata nke wetara na ndepụta a. Gịnị ma ị gwakọta ha ozugbo? Nke ahụ bụ otu n'ime WordPress 'nnukwu adọta m; dị iche iche na ndebiri ndebiri na ogo ọ bụla ị họọrọ.
Feb 28, 2012 na 10:24 PM
Ndewo @jonschr: disqus - ebee ka ibe ọdịda? Anyị na-ebipụta njikọ na saịtị dịka http://www.corporatebloggingtips.com mana choro ilebanye anya na uzo ozo. Ọ ga-akara m mma ịnwe okporo ụzọ niile ebe a, kpoo ikike nke ngalaba a, ma hụ na njikọ ọ bụla jikọtara ngalaba a na engines ọchụchọ. Olileanya na nke ahụ bụ ihe ị na-eche! Ọ bụrụ na m na-ebipụta na ọtụtụ ngalaba, ana m ekewapụ ikike ahụ… Ọ ga - akara m mma ịnwe saịtị 1 siri ike karịa ndị na - adịghị ike 2.
Feb 29, 2012 n’elekere 12:16 nke abali
Yep, nke ahụ bụ otu! Hmm. Na-eme ka uche… Ọ bụ ezie na, gịnịzi ị gaghị eme ka “ibe ọdịda” peeji nke saịtị a? Ọ dịghị mmejọ ọ bụla ezubere; nanị na-eche ihe uru bụ. Enwere m mmasị na peeji ọdịda, BTW. Ọ dị oke mma.
Feb 29, 2012 n’elekere 8:46 nke abali
@jonschr: disqus enweghị mmejọ ewepụrụ ma ọlị! O nwere ike iju gị anya ịchọpụta na nke ahụ bụ saịtị WordPress, kwa. Ma enwere otutu akwukwo nke di n'ime ya nke na achoputa ihe nyocha. N'oge a tọhapụrụ akwụkwọ ahụ, ọ bụ ihe ama ama na ịnweta saịtị saịtị ọdịda maka akwụkwọ a. Achọrọ m ịnweta ngalaba nke kachasị maka naanị "ịde blọgụ ụlọ ọrụ" ma ọ rụọ ọrụ nke ọma. Achọrọ m ka ọdịnaya ahụ melite ugboro ugboro na saịtị ahụ mana achọghị m ide blọọgụ ọzọ - yabụ ịdọrọ na ndepụta, mmekọrịta mmekọrịta, na iji ya dị ka kalenda mmemme na-agbanwe ya mgbe niile. Ọ kwadara nke ọma maka ọtụtụ usoro ya mere ọ rụrụ ọrụ ahụ wee gaa n'ihu na-erere anyị akwụkwọ!